Weydii Khabiirka Kala Duwan: Waa maxay natiijada Google Analytics ee micnaheedu yahay ganacsiyada
Google waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo saameyn leh mashiinka raadinta s. Waxaa dhawaan ku dhawaaqay in dhammaan isticmaalayaasha Analytics ay awood u yeelan doonaan inay galaan warbixinnada cabbiraadda warshadaha iyada oo loo marayo dashadooda bilaha soo socda. Warbixinnadani waxay u ogolaanayaan dadka websaydka inay fahmaan boggooda internetka - free search lost funds. Waxaa intaa dheer, waxay helayaan fikrad ah waxa maalmahan socda iyo sida loo helo gaadiid awood leh oo ku yaala goobahooda iyagoo si wacan u soo bandhigaya indhaha Google
Andrew Dyhan, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt , wuxuu halkan ka eegayaa qaar ka mid ah talooyinka ku habboon ee ku habboon arrintan.
Waa run in warbixinnada asaasiga ah aan wali laga helin dhamaan mulkiilayaasha bogagga. Si kastaba ha ahaatee, kuwani waa hab fiican oo lagu bixin karo macluumaad ku saabsan heerka sare, xisaabinta, iyo tayada qoraaladaada. Waxa kale oo aad ogaan kartaa nooca jajabka ee jajabku ay joogaan iyo sida loo horumariyo. Waxaa intaa dheer, dadka isticmaala waxay fikrad ka helayaan qalabyada ay martida u isticmaalaan si ay u eegaan boggooda internetka. Google ayaa sidoo kale tilmaamay maabka khariidadaha iyo kuleylka iyada oo loo marayo warbixinnada asaasiga ah si loo siiyo dadka isticmaala fursado badan oo lagu hagaajiyo.
Waa muhiim in la helo habdhaqanka sababtoo ah taasi waa habka kaliya ee lagu heli karo xogta hoos timaada Qaybta Dhageystaha ee ku yaal khariidada Analytics..Ku dhowaad dhammaan websaydhiyeyaashu waxay isticmaalaan warbixinnada asaasiga ah, oo ay ku jiraan Twiddy, oo ah shirkad safar ah. Wuxuu cadeeyaa fursadaha koritaanka warshadaha iyada oo loo marayo warbixinnada caadiga ah. Sida laga soo xigtay CEO Twiddy Ross Twiddy, waxay helayaan natiijooyinka faahfaahinta falanqaynta iyo qiimeynta xisaabaadka si ay u haystaan ​​fikrad ah waxa ay tahay in ay bartilmaameedsadaan iyo inta qof ee ay xiiseynayaan alaabtooda iyo adeegyadooda
U Isticmaal Falanqaynta Naqshadeynta Ganacsigaaga
Haddii aad ku jirto ganacsi weyn ama urur yar, waa inaad ka faa'iideysataa qiimeynta falanqaynta shirkaddaada. Waxay ka caawisaa ganacsatada inay diirada saaraan waxa soo socota, waxa ugu wanaagsan ee ay u shaqeyn karaan iyo sida loo horumariyo ganacsigooda oo ay u helaan natiijooyinka la doonayo. Waxay sidoo kale hubisaa in aan hayno xog sax ah. Waxaa intaa dheer, waxaan si sahlan u falanqeyn karnaa oo qiimeynaa heerka xaddiga boogaha ee goobahayaga. Illaa hadda, Google Analytics ayaa na siiyay fikrado badan oo ku saabsan sida wanaagsan ee boggayagu uqoro. Si kastaba ha ahaatee, cabbiraadda falanqaynta waa hab lagu ogaado sida aan u hagaajin karno boggayaga iyo sida loo dejiyo hadafyada dhabta ah.
Mudnaanta fursadaha hagaajinta
Sidee u la barbar dhigtaa goobtaada kuwa kale ee wershada? Taasi waa waxa lagaa rabo in aad fiiriso. Isticmaalka warbixinnada calaamadaha, waxaad si dhakhso ah u ogaan kartaa nooca dadaalkaaga ee goobtaadu u baahan tahay natiijooyin wanaagsan. Sidaa darteed, waxaad badbaadin kartaa wakhti badan oo aad diirada saari karto waxyaalaha saxda ah. Markaad haysato warbixinnadaas, waxaad si fudud u cabbiri kartaa waxqabadkaaga goobta aadna kala hormarin kartid fursadaha hagaajinta ilaa xad.
Samee hadafyo dhab ah
Waa amaan in la yiraahdo warbixinnada cabbiraadda waxay kaa caawin karaan inaad dejiso hadafyada dhabta ah. Taasi waxay ku siin kartaa macluumaad ku saabsan sida aad isu barbar dhigi kartid kuwaaga iyo sida looga adkaado warshadaha. Waa qasab in macaashka xajmigaaga ee ka baxsan uusan ka badnayn konton boqolkiiba. Haddii ay dhacdo, markaa waxaa jira fursado aad lumiso inta badan martidaada iyo darajadaada Google ee laga yaabo in ay saameyso.